ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဂွန်ဆန်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Triathlon ပြိုင်ပွဲကို အဖွဲ့လိုက်သွားပြိုင်မယ့် TEAM PT Relay Team အဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ Phoe Thaw, Sai နဲ့ Eileen တို့သုံးယောက် In:Inspiration/Aspiration/Motivation, Kawi Inspires, Life Hacks, Videos
မတူညီတဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံအနေအထားတွေ၊ မတူညီတဲ့ မွေးဖွားရာဒေသတွေနဲ့ မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ လူသုံးယောက်။ ဒီလိုအသွင်မတူညီတဲ့ လူ (၃) ယောက်ကို အတူတကွပေါင်းစည်းစေခဲ့တာက ကိုယ်ခံပညာ၊ CrossFit နဲ့ Triathlon အစရှိတဲ့ အားကစားတွေကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ချင်း တူညီကြလို့ပါ။ ဒီအားကစားသမား သုံးယောက်လုံးက ဘဝနဲ့ အားကစား တစ်သားတည်းဖြစ်လောက်တဲ့အထိ အားကစားကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေပါ။ သူတို့က သူတို့လုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေတိုင်းမှာ ထိပ်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိဖို့အတွက် စည်းကမ်းရှိမှုနဲ့ ဇွဲလုံ့လဝီရိယရှိမှုတွေနဲ့ တစိုက်မတ်မတ် စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ဆောင်မှုတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို အမှန်တကယ် နားလည်လိုက်နာသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလို မတူညီတဲ့နောက်ခံကနေ လာကြတဲ့ Phoe Thaw, Sai နဲ့ Eileen တို့ဟာ တူညီတဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ လာမယ့် ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် Challenge Gunsan-Saemangeum ဆိုတဲ့ Triathlon ကို TEAM PT Relay Team အနေနဲ့ အဖွဲ့လိုက် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Triathlon ဆိုတာကတော့ “ရေကူး၊ စက်ဘီးစီး နဲ့ အပြေး” ဆိုတဲ့ အားကစားနည်းသုံးမျိုးကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်သွားရတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဂွန်ဆန်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Triathlon ပြိုင်ပွဲမှာတော့ TEAM PT Relay Team ထဲက… Eileen က ရေကူးတဲ့အပိုင်း၊ MMA fighter ကိုဖိုးသော်က စက်ဘီးစီးတဲ့အပိုင်း နဲ့ MMA fighter ကိုစိုင်းက ပြေးတဲ့အပိုင်းတို့ကို အသီးသီးတာဝန်ယူထားကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ဘယ်လိုတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး ကြိုးစားလေ့ကျင့်နေကြလဲ? ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကို ကြုံတွေ့ရမယ်လို့ မျှော်မှန်းထားကြလဲ? အားလုံးအတူတူ ကျော်ဖြတ်ပြီး အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဘယ်လိုတွေစိတ်ဆုံးဖြတ်ထားကြလဲ? ဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်! #100PLUSfortheWIN ...
No Recipe Challenge – Episode4In:Kawi Eats, Videos
No Recipe Challenge episode4မှာတော့ ကဝိရဲ့ producer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အောင်ခန့်နဲ့ Shal တို့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် “ချက်စား” ထားပါတယ်! နောက်တစ်ခေါက်မှာရော ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ပေးပါနော်! ...
Lime Challenge In:Kawi Eats, Videos
အခုတလော TikTok မှာခေတ်စားနေတဲ့ Lime Challenge လေးကို ကဝိ က ကိုကို၊ မမတွေ လုပ်ဆောင်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အချဉ်စားနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲနော်။ ဒါပေမယ့် အချဉ်မကြိုက်တဲ့လူတွေ စားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လို reaction တွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာ video လေးကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ… အသေတွေထိုင်ရယ်နေရတယ်… 😂😂😂 ...
Thingyan Greetings from Kawi In:Kawi Eats, Kawi Inspires, Videos
သင်္ကြန်မှာတွေ့ရတဲ့ လူအမျိုးမျိုး In:Kawi Inspires, Videos
သင်ရော ဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာပါလဲ? နောက်ဆုံးကတစ်ယောက်လိုလား? ...
Single တစ်ယောက်ရဲ့ အားသာချက် In:Kawi Inspires, Videos
တချို့တွေက ပြောကြတယ် Single ဖြစ်လို့အားငယ်နေရတယ်တဲ့…Single ဖြစ်နေတာ မကောင်းဘူးလို့ပြောကြပါတယ်…တကယ်တမ်းတော့ ဒါကတစ်ဝက်ပဲမှန်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့အဆိုးက ဒွန်တွဲနေတာပါ။ ဒီတော့ Single ဖြစ်ရတာလည်း ဘယ်လိုကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ဒီ Video လေးကိုကြည့်လိုက်နော်! ...
ဖုန်းသုံးတဲ့သူ (၄) မျိုး In:Kawi Inspires, Videos
သင်တို့မှာရော ဒီလိုမျိုး စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာကောင်းလောက်အောင် ဖုန်းသုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုး ရှိကြလား? ဒါမှမဟုတ်… သင်ကိုယ်တိုင်ကပဲ ဒီလိုဖုန်းသုံးတဲ့သူ ဖြစ်နေတာများလား? 🤔😂📱 ...